वार्षिक ९ अर्ब नाफा कमाउने कम्पनीको बिषयमा तपाईलाई थाहा छ ? Bizshala -
वार्षिक ९ अर्ब नाफा कमाउने कम्पनीको बिषयमा तपाईलाई थाहा छ ?
काठमाण्डौ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले रु नौ अर्बभन्दा बढी सञ्चित मुनाफा आर्जन गरेको छ ।
क्यानका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमका अनुसार क्यानले आव २०७३/७४ सम्म सरकारलाई रु एक अर्ब ४६ करोड ८८ लाख राजश्व भुक्तानी गरेको छ ।